‘मैले महिलालाई हराएको होइन’ |
‘मैले महिलालाई हराएको होइन’
प्रकाशित मिति :2018-03-02 17:01:11
प्रदेश न ३ को मुख्यमन्त्री बन्नु भो । दुई पटक मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार गर्नुभयो । तर महिला परेनन् नी ?
पर्नुहोला नि । अर्को पटक पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ । त्यस्तो केही होइन । अर्को लटमा पर्न सक्छन् । महिला नपर्नुमा कुनै जस्टिफाई गरेर यसै कारण परेनन् भन्ने अवस्था छैन ।
महिलालाई हराउँदै मुख्यमन्त्री बन्नु भो । महिलाको पक्षमा बढी भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै छन् । तपाईं महिलामैत्री हुनुहुन्छ भनेर कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?
यो कुनै विषय होइन । जब चुनावमा गइन्छ, हारजित त हुन्छ नै । चुनावमा एउटाले हार्ने र अर्कोले जित्ने भन्ने प्रष्टै हुन्छ । महिलालाई हराउने, महिला जिताउने भन्ने होइन । मैले महिला हराएको होइन, प्रतिस्पर्धीलाई हराएको हो ।
हाम्रो मूल संविधान नै महिला हक, अधिकारका बारेमा प्रष्ट छ । महिलाका पक्षमा कानूनहरू छन् । अहिलेको संसदमा हेर्नुस्, समानुपातिकमा हेर्नुस् । एक जना पनि पुरुष नपरेर सबै महिला नै पर्नुभएको छ ।
उपप्रमुखमा सबै महिला पर्नुभएको छ । देश नै महिलामैत्री छ । संविधान नै महिलामैत्री छ । हरेक ठाउँ, हरेक इस्युमा महिलाको कुरा हुन्छ । कतिपय ठाउँमा योग्य र क्षमतावान मान्छे खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संविधानले नै महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । म त्यहि भित्रको मान्छे हुँ । त्यहि नागरिक हुँ । म फेरि पहिलेदेखि नै महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर मान्यता राखेको मान्छे हुँ । जहाँ–जहाँ काम गरे ति काम गर्ने ठाउँमा महिलालाई सम्मानित गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । मन्त्रिपरिषद् बन्ने कुरा साह्रै थोरै संख्यामा छाैँ । थोरै हुँदा जम्मा ६/७ जनाको मन्त्रिमण्डल बन्नुछ । त्यसमा थप्न पनि सकिन्छ होला त्यसमा हेर्दै जाउँ ।
पुनः मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ ? महिलालाई कसरी समेट्नु हुन्छ ?
महिलालाई कसरी समेट्ने भन्ने होइन । सकेसम्म समेटिन्छ । यो यति उति भन्ने छैन । जति सकिन्छ, त्यति समेटिन्छ ।
तपाईंको प्रदेशमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? महिलाका समस्या समाधान गर्न के गर्दैहुनुहुन्छ ?
महिला समेट्ने धेरै ठाउँछन् । एउटा ठाउँमा मात्रै महिला भएनन् भनेर कहिँ पनि छैनन् भन्ने होइन । महिला जहाँसुकै समेटिएका छन् । समितिहरू थुप्रै छन् । महिलाको उपस्थिति सबै ठाउँमा राम्रो छ । त्यहाँ बन्ने समितिहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति हुन्छ नै ।
हरेक ठाउँमा जहाँजहाँ हुन्छ । महिलाहरूले प्रतिनिधित्व नगरेसम्म पुरुषले प्रतिनिधित्व गरेको कहि पनि छैन । कानूनले जे भन्छ, त्यति न्युनतम हामीले गर्नै पर्छ ।
महिला नै नभएको ठाउँमा, कतिपय अवस्थामा महिलाको अभाव पनि छ । सबै ठाउँमा महिला हुनुपर्छ भन्ने कुरा नहुन पनि सक्छ । समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा हुन सक्छ ।
काठमाडौंकै दरबारमार्ग घटना, ललितपुरमा भएको सामुहिक बलात्कारका घटनाले तपाईंको प्रदेशमा महिला सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ । तपाईंको कार्ययोजनामा यी समस्याको कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यो प्रदेश भनेको नयाँ व्यवस्था हो । यसको व्यवस्थापन आफैँमा जटिलता छ । व्यवस्थापनको अभाव, विभिन्न खालका भौतिक संरचना यी सबै आ–आफ्नो ठाउँमा छन् ।
त्यसकारण अहिले नै यी सबै कुराको परिणाम खोज्ने हो भने परिणाम पाइदैन । परिणाम खोज्नका लागि केही समय पर्खिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो । संस्थागत गर्नुप¥यो । यो आफैँ नयाँ संरचना हो । यो नयाँ संरचनालाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै कामले गति लिने हो । अहिले महिलाहरूलाई जोखिम छ । महिलाहरूका समस्या अहिले तुरुन्तै गरिहाल्छु भन्ने होइन । अहिले अधिकतम महिलामाथि हिंसा भएको अवस्था छ । छाउपडी प्रथाका नाममा, बोक्सीको आरोपमा महिलालाई मलमुत्र खुवाउने सम्माका घृणित काम भएका छन् । यी तमाम कुराहरूलाई स्पष्ट नीति बनाएर महिला हिंसालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन्छौ । कानून बनिसकेको छैन । यस्ता विषयलाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुर्याउने कानून बनाई हिंसामूक्त समाज निर्माणका लागि म एक्लैले केही गर्न सक्दिन । सबैको हातेमालो जरुरी छ ।
लैंगिक मैत्री प्रादेशिक कानून बनाउन तपाईको भूमिका के हुन्छ ?
लैंगिक मैत्री कानून बनाउनेतर्फ म पोजेटिभ छु । मेरो विमति रहदैँन । मेरो भूमिका सकारात्मक हुन्छ ।